Iindlela ezi-2 zokwenza iCode Comet eyenza umsila
Icebo elomileyo kunye ne-Liquid Nitrogen Comet Recipes
I-comet yangempela ngumxube wezinto ezininzi. Nangona i-comet nganye inesiginitsha sayo esisodwa seekhemikhali, ininzi yazo iqulethe amanzi e-ice, ama-organic compounds, uthuli, kunye namatye okanye amatye. Kuyolonwabo ukwenza i-comet yakho kwaye uyibeke kwimoya eyenziwe yelanga ukuze ugcine ukuziphatha kwayo. Nantsi indlela yokwenza umzekelo we-comet oziphatha ngendlela efana neyoqobo:
I-Ice Ice Model Comet Materials
Le recipe ethile isebenzisa i-carbon dioxide eqinile (iqhwa elomileyo) ukwenzela ukuba liza kunqumla umsila we-comet xa ibonakaliswe ukushisa.
Zive ukhululekile ukufaka endaweni yezithako ukuze ubone ukuba zithini impembelelo abanayo kwimodeli yakho.
Yilumke ngeqhwa elomileyo . Kuyabanda kakhulu kwaye kunokukunika isithwathwa xa uyichukumisa. Gqoka iiglavu!
isitya okanye ibhodlo enkulu ngokwaneleyo ukuze ubambe izithako zakho
indebe yamanzi (iya kufakelwa emkhenkeni xa ixutywe neqhwa elibandayo)
indebe yokungcola (iqukethe i-organic compounds kunye ne-grit, njenge-comet yangempela)
indebe yentlabathi (amaninzi amaninzi afaka i-silicates, njengesihlabathi okanye i-quartz)
amanye amalahle (ii-comets ziqulethe izinto ezimnyama, ezinokuba yi-carbon, njengamalahle)
encinci ye-ammonia okanye i-window ecocekileyo (i-ammonia yi-nitrogen ekwakhelwe kwi-comets)
ezimbalwa iikomityi zeqhwa elomileyo eliqiniweyo (i-carbon dioxide iqhelekile kwi-comets)
isiraphu (ukhetho - longeza ama-organic compounds kwaye lunceda intonga ye-comet ndawonye)
iphephandaba (okukhethiweyo-yibeke kwindawo yakho yokusebenzela ukuze uhlambuluke lula)
Yenza i Comet
Ukuba iqhwa lakho elomileyo lifika kwiindawo ezinkulu, ungayifaka kwisikhwama sephepha bese uyitshitshisa ngesando ukuze uyichoboze.
Ukuba ufumana amaqabunga amileyo e-ice , ungayisebenzisa njengoko kunjalo.
Sebenzisa i-spoon yamaplanga okanye isandla esisikiweyo ukuze udibanise kunye nezithako uze uzixube kunye ukuze wenze ibhola. Njengama-comets zangempela, imodeli yakho yenza ukuhlukana. Esinye isiluleko ukuze sincede sibambelele ndawonye kukuvumela ukuba siphumle ixesha elide ngaphambi kokulikhetha nokuyihlola.
Unokulingisa umoya welanga ukuba wenze umsila we-comet ngokuvuthela umzekelo. Ukushisa komphefumlo wakho kuya kufana nokufudumala kwelanga. Ngaba uyaphunga i-ammonia? I-comets yangempela iyaphunga ifana nefestile ecocekileyo!
Utywala lweNitrogen Comet
Enye indlela yokulinganisa i-comet kunye nomsila kukusebenzisa i-nitrojeni yamanzi . Kule ngqungquthela, udibanisa izinto ezinamaqabunga, ezinamatye kwi-nitrogen enomileyo kwaye uyisuse ukuze ubone umzila womoya. Ekubeni i-nitrojeni yamanzi ibomvu ngakumbi kuneqhwa elomileyo, uya kufuna ukusebenzisa i-tongs ephathekayo. Ixabiso elifanelekileyo kwi-rocket comet li-briqual briquette.
Thelekisa iCompet Simed to Comet Real
IiKomethi esizibonayo zivela kwi-Cloud Oort okanye kwi-Kuiper Belt. I-Cloud ye-Oort yinkalo yezinto ezizungeze inkqubo yelanga. I-Kuiper Belt yindawo engaphaya kweNeptune equle imizimba emininzi yeqhwa ngaphakathi kwendawo ephezulu ye-Sun.
I-comet yangempela inokuthi ithathwa njengoluhlobo lwe-snowball ecolileyo eyenziwe ngamanzi aqingqiweyo, uthuli, amatye kunye nothuli. Kukho iinxalenye ezintathu kwi-comet:
I-nucleus - "I-snowball engcolileyo" inxalenye ye-comet iyinucleus yayo, equkethe umthamo we-meteoritic, i-gesi ezinqabileyo (njengeqhwa elomileyo) kunye namanzi.
i-coma - Njengoko i-nucleus ye-comet ihamba ngokusondeleyo kwi-Sun, ibuhlungu kwaye i-gases igciniweyo i-sublimate ibe ngumphunga.
Umphunga udonsa iincinci zothuli kunye nalo nucleus. Ukukhanya kubonakalisa iingxelo zothuli ngenxa yesimo esingenangqondo se-comet.
umsila - ii-Comets zinyuka, ngoko ziyeka umzila wegesi kunye nothuli ekuvukeni kwawo. Umoya wesola uphinde uqhube umcimbi ngaphandle kwe-comet kwaye uyayifaka ibe ngumsila oqaqambileyo. Ngokuxhomekeke kwindawo yalo, i-comet ingaba nomnye okanye imisila.
I-Halloween Chemistry Imiboniso
Quotes Seretse Khama
I-Empire 8 Iintlanganiso ze-Athletic
Yintoni eyenza uCharlemagne Mkhulu kangaka?